ဟိုပုံးမြို့နယ်တွင် ငွေကျပ် သိန်း ၈,ဝ၀ဝ တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများ ဘယ်ကလာသလဲ - Yangon Nation News
ဟိုပုံးမြို့နယ်တွင် ငွေကျပ် သိန်း ၈,ဝ၀ဝ တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်
မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်တွင် လွိုင်လင်မြို့အထွက်၊ လွိုင်လင်-တောင်ကြီးသွားကားလမ်း၊ ဟိုတင့်ကျေးရွာအနီးတွင် လွိုင်လင်ဘက်မှ တောင်ကြီးဘက်သို့ မောင်းနှင်လာသော ခဲရောင်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးမှာ ရှာဖွေစစ်ဆေးသည့်နေရာသို့မရောက်မီ မသင်္ကာဖွယ်ရပ်တန့်သွားသည်ကိုတွေ့ရှိသဖြင့် သွားရောက်စစ်ဆေးမည်ပြုစဉ် Revo အမျိုးအစားမော်တော်ယာဉ်နှင့် Ford အမျိုးအစား မော်တော်ယာဉ်တို့ ထပ်မံရောက်ရှိလာပြီး အဆိုပါမော်တော်ယာဉ် ၃ စီးမှာ ဟိုတင့်ကျေးရွာအတွင်းသို့ မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားသဖြင့် ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် အဖွဲ့များခွဲ၍ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ည ၇ နာရီ ၂၅ မိနစ် အချိန်ခန့်တွင် ဟိုပုံးမြို့အဝင် ဆီဆိုင်အနီး စိုင်းဝမ်းလျန်း မောင်းနှင်ပြီး စိုင်းဆန်ကို လိုက်ပါလာသည့် Platana အမျိုးအစား ခဲရောင်ယာဉ်အား စတင်ဖမ်းဆီးရမိပြီး ည ၇ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်တွင် လွိုင်လင်-တောင်ကြီးကားလမ်း၊ မိုင်တိုင်(၁၀၁/ဝ)အနီးတွင် Ford အမျိုးအစားမော်တော်ယာဉ်အား ပိတ်ဆို့တားဆီးစဉ် နောက်ပြန်လှည့် မောင်းပြေးသဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာ မော်တော်ယာဉ်မှာ လမ်းဘေးလျှိုအတွင်းထိုးကျသွားပြီး ယာဉ်ပေါ်ပါသူ ၂ ဦးမှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့၍ အဆိုပါယာဉ်အားစစ်ဆေးရှာဖွေရာ ယာဉ်ပေါ်မှဆာလာ အိတ်များဖြင့်ထည့်လျက် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၈ဝဝ,ဝဝဝ ပြား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဟိုပုံးမြို့အဝင် ရေထွက်အနီး၌ ဖမ်းဆီးရမိ မူးယစ်ဆေးဝါးများ သယ်ဆောင်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်သူ မနန်းဆိုင်ထွေးနှင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်း မောင်သန်း(ခ)ကျော်ခင် တို့အား Revo အမျိုးအစား မော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူ ဆက်လက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း၊ စစ်ဆေးချက်များအရ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများ သယ်ဆောင်လာသည့် မော်တော်ယာဉ်ပေါ်မှ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသူ ၂ ဦးမှာ စိုင်းယဉ်နှင့် စိုင်းနော်ခမ်း တို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသဖြင့် မနန်းဆိုင်ထွေး(၃၅)နှစ်၊ မောင်သန်း(ခ)ကျော်ခင်(၂၇)နှစ်၊ စိုင်းဝမ်းလျန်း(၂၀)နှစ်၊ စိုင်းဆန်ကို(ခ) စိုင်းကွမ်ခေး (၂၅)နှစ်၊ စိုင်းယဉ်(တိမ်းရှောင်)၊ စိုင်းနော်ခမ်း(တိမ်းရှောင်)တို့အား မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေအရ အမှုဖွင့်အရေးယူထားရှိပြီး ကွင်းဆက်တရားခံများ ဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဟိုပုံးမြို့နယ်တွင် ငွေကျပ် သိန်း ၈,ဝဝဝ တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိ
Seizure of narcotic drugs worth 800 million Kyats in Hopong Township
Nay Pyi Taw- 14th November 2020
On 12th November of 0500 hour, while the officers from Drug Enforcement Division were conductingaroutine check at Loilem – Taunggyi main road near Ho Tint village of Loilem Township exit,asilver colored vehicle that was travelling from Loilem to Taunggyi surprisingly stopped before reaching the police inspection area. Out of suspicion, the officers approached near its vehicle, thus the Revo and Ford vehicles suddenly appeared, and all3of the vehicles drove off to Ho Tint village. However, DED officers divided into teams to arrest Sai Wan Lyan and Sai San Ko nearapetrol station of the entrance of Hopong Township at 1925 hour, in which they were drivingaPlatana vehicle asafrontier for the whole group. Moreover,aFord vehicle was also found by the officers near 101/0 mile on Loilem -Taunggyi road during 1900 hour. Unfortunately, the vehicle reversed its direction while the officers fired shots at them causing the vehicle to plunge into the ditch, thus2suspects from the vehicle escaped the scene as well. Taking this opportunity, the officers searched the vehicle and seized 800,000 yaba tablets. At the exact time, DED officers were able to arrest Ma Nan Sai Htwe and Maung Than @ Kyaw Khin (husband), who were also involved in this drug related case with their Revo vehicle near Yay Htwe of the entrance of Hopong Township. In terms of the interrogation statements, it reveals that the escaped suspects from the vehicle are Sai Yin and Sai Naw Khan. Due to their involvement in this case, the arrested offenders; Ma Nan Sai Htwe of 35yrs, Maung Than @ Kyaw Khin of 27yrs, Sai Wan Lyan of 20 yrs, and the absconders; Sai San Ko @ Sai Kwan Khay of 25yrs, Sai Yin, and Sai Naw Khan will be prosecuted under narcotic drugs and substances law. Thus, source of Myanmar Police Force clarify that follow up investigation are being carried out to arrest more suspects from this case.